I-Sunnyside Country Oasis
Sijonge kwimidiya yoluntu @sunnysidecountryoasis
Zisa usapho lonke kule ndawo inkulu enendawo eninzi yokuzonwabisa. Yonwabela imbonakalo entle yeenduli kunye neenkomo zobisi ezijikelezayo ezingqonge ikhaya lethu.
Kukho ukungena okwahlukileyo kulo lonke inqanaba elisezantsi lekhaya lethu. Indawo yokungena ekhanyiswe kakuhle esemva kwekhaya lethu iya kukwehlisela kwizinyuko ukuya kwinqanaba elisezantsi. Sihlala phezulu kwaye unokusibona ngamaxesha athile xa sidlula okanye uve izinja zethu zikubulisa xa ufika.
Ikhaya lethu linembali eyodwa-yakhiwa kuqala ngootatomkhulu nootatomkhulu ngo-1980 kwaye sibekwe ngaphesheya kwifama yobisi yosapho lwethu. Igumbi lokulala elifumanekayo kuwe lalidalelwe abantu abasuka eJapan ukuze bafumane amava njengomfundi. ifama. Usapho lwam luye lwabamba ngaphezulu kwe-10 yaba bantu ukuba bahlale apha ekuhambeni kwexesha! Aba baqeqeshwayo bathumele i-knick knacks kumakhulu wam xa bebuyela ekhaya- uya kuzifumana ezi zinto ziboniswa ngexesha lokuhlala kwakho.
Siyavuya ukubonelela ngekhaya lethu njengoko sibekwe embindini weendawo ezininzi ezishushu ezisingqongileyo! Iindwendwe ze-PGA Tour, iindwendwe ze-Elkhart Lake, abathanda ugqatso lwe-Road America, ababonisi be-Horse-A-Rama, ababukeli be-EAA, abalandeli be-Packer, iindwendwe ze-Camp Sinawa, abadlali begalufa be-Autumn Ridge league, abafuna i-Door County, kunye nabakhenkethi baseLake Michigan baya kufumana indawo yethu ngokukodwa. Kukho iindlela ezikufutshane zokutyibiliza ekhephini, i-snowshoe, kunye neendlela zokuhamba ngekhephu.
Sinegumbi elinye lokulala! Inokumkanikazi kunye nebhedi ephindwe kabini.
Kumaqela e-5-6 i-queen isayizi yomoya yomoya kunye ne-foam pad iya kusekwa kwigumbi lokuhlala kuwe.
Kumaqela e-7- Umntu omnye uza kuphola esofeni!
Siza kuthathela ingqalelo amaqela angaphezu kwe-7 kwimeko ngemeko-nceda usithumelele umyalezo ngeenkcukacha.
Zonke iibhedi zine-memory foam padding phezulu kwaye zogqunywe ngesikhuselo seencukuthu ezingangeni manzi. Ngaphezulu koku kukho i-mattress pad yokuthuthuzela okongeziweyo. Imiqamelo ikwagqunywe ngezikhuselo zeencukuthu ezingangeni manzi. Iilinen zethu zimhlophe kwaye zicocwa ngebleach phakathi kokusetyenziswa.
Pakisha kwaye udlale kwakhona.
I-closet enkulu yezinto zakho eziza kuxhonywa ngee-hangers zinikezelwe. Umnyango wegumbi lokulala unokutshixwa.
Igumbi lokuhlamba elinesepha ukuze uyisebenzise.]
Ikhitshi eligcweleyo linesitovu/ioveni, imicrowave, ifriji/ifriji, itoaster, isinki. Iikhabhathi zixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto zasekhitshini, ipani yepizza, i-pizza cutter, i-cutlery, iipleyiti / izitya, kunye nesilivere. Umenzi wekofu kunye nekofu ilungele ukusetyenziswa. Sine-crockpot kunye noGeorge Foreman ungasebenzisa nawe. Unoxanduva lokubonelela ngegrosari kunye nokutya. Ivenkile yethu yegrosari ekufutshane imalunga nokuhamba ngomzuzu we-10/15. Sinayo ikofu esandleni kodwa!
Igumbi lokuhlambela eligcweleyo elinethayile enkulu yokuhamba ngeshawa. Ukuhlanjwa kweenwele kunye nomzimba kuyafumaneka. Kunikezelwe iitawuli, amalaphu okuhlamba, isomisi seenwele, nephepha elongezelelweyo langasese.
Qeqesha izixhobo ezifumanekayo- ukutsalela phezulu, i-treadmill, ibhola yokuzilolonga, i-yoga mat, kunye nobunzima obahlukeneyo besandla.
Ukuzisa abantwana/abancinci/abantwana? Igumbi lokudlala eligcweleyo (ubukhulu becala kwaba ba-4 nangaphantsi), iincwadi, intente encinci yokudlala, kunye netafile elingana nomntwana. Pakisha kwaye udlale kunye nezihlalo zomntwana ezikhoyo.
Imini enetha okanye uchithe ubusuku endlini? Imidlalo yebhodi iyafumaneka- zama esiyithandayo yasekhaya: Ubomi baseFama. IiPopcorn, iiDVD, iRoku ziyafumaneka kodwa ziya kufuna ukungena kwakho kuyo nayiphi na iNetflix/Hulu. I-Xbox 360 ingasetyenziswa.
Inqanaba lethu elisezantsi ngokobuchwepheshe alinamoya (inqanaba lethu eliphezulu li) kodwa lihlala lipholile ngeenyanga zasehlotyeni. Uninzi lwabalandeli lukwakhona ukupholisa okanye nokuba kusetyenziswe ingxolo emhlophe!
Bukela ukutshona kwelanga kwipatio yethu engasemva. Abantwana banokutshisa amandla kwi-playset. Idlelo elineenkomo zobisi ezisuka kwifama yosapho lwethu likwiyadi yangasemva- ukonwabele ukubukela iinkomo zisiya elucingweni zisiya kutyelela. Umngxuma weBonfire okhoyo unentaphane yeenkuni ezinokusetyenziswa.
Mna nomyeni wam sihlala kwigumbi eliphezulu kumgangatho omkhulu kunye nonyana wethu nezinja. Siza kukunika imfihlo yakho! Siza kuba neencwadana ezininzi ezilungiselelwe ukuba ujonge iindawo zokutya zasekhaya kunye nezinto omawuzenze ukuba ufuna ukuba ngummi wasekhaya!
Sinelayisensi epheleleyo kwaye sikulungele ukukwamkela. Oku kuthetha ukuthini ukuba siyigqibile inkqubo yokuhlola ikhaya lethu ukuze sikubambe ngokwemigaqo yezomthetho yaseWisconsin. Sinezixhobo zethu zokujonga umsi kunye ne-carbon monoxide alarms ukuya kwikhowudi kwaye zibekwe ngokufanelekileyo. Sinesicima-mlilo esilungele ukusetyenziswa kwakho. Iindlela zethu zokuphuma/iindawo zokuphuma nazo zikwikhowudi xa zifuneka. Amanzi ethu aphumelele ukuhlolwa komgangatho ngokungabikho kweebhaktheriya.
Ifakwe emaphandleni kufutshane neValders. Imizuzu nje kude kwi-Autumn Ridge Golf Course kunye nePigeon Lake. Ukuhamba ngemizuzu embalwa ukusuka kwivenkile yethu yesonka samasi kunye ne-ayisikrimu.
Unokuzijonga nge-keyless entry. Unokusibona ngamaxesha athile sidlula kungenjalo siceba ukukunika ngokupheleleyo ubumfihlo bakho!